Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri
Home > Ngwaahịa > Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri (Total 24 Ngwaahịa maka Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri)
Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Mmiri Mmiri Elu Mmiri Dị Elu
Tag: Ogige Ụdị Mmiri Mmiri nke Mmiri , DC Brushless Anyanwụ Mmiri mmiri , Igwe anaghị agba nchara Jet Pump
Ọ bụ ụzọ kachasị mma nke mmiri n'anyanwụ nke ụwa, karịsịa na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ ebe ọkụ eletrik na-adị ụkọ ma ọkụ eletrik adịghị. Ọ bụ ezigbo akụ na ụba, nke a pụrụ ịdabere na nke a pụrụ ịdabere na ya iji jiri ike anyanwụ na-enweta ebe...
Ogige Egwuregwu Mmiri Egwuregwu Ọkụ
Tag: Ugbo Ala Ugbo , Obere Mmiri nke Mmiri , Mmiri Mmiri nke Mmiri
Usoro a na-agụnye usoro nhazi nke solar cell, mmiri na-agbagharị mmiri na mmiri mgbapụta, nke na-azọpụta ngwaọrụ nchekwa nchekwa dị ka batrị nchekwa, na-eji dochie anya nchekwa na mmiri na nchekwa mmiri. Usoro a nwere ntụkwasị obi dị ukwuu ma...
Tag: Ike Energy Commercial Power Generation , Ogwe Ike Ike Photovoltaic , Grid fotovoltaic jikọtara ọgbọ
Ogwe Ike Power Photovoltaic nke igwe bụ ngwaọrụ nke na-agbanwe ike ọkụ na ike eletriki site na iji usoro ntanetị. Ọ bụ ike dị ọcha ma dị ike nke ụwa. Igwe igwe eletriki foto nke igwe na-ejikọta ya na ngwanrọ solar cell, igbe nkwụsịtụ, Ụlọ nchekwa...
Mpempe akwụkwọ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ nke Polysilicon
Tag: Ihe nchekwa gburugburu ebe obibi , Ike Ngwá Ọrụ Ike , Ọdịdị Nfe Mfe
Polycrystalline environment-friendly solar panels, ike ike na-azọpụta, ogologo ndụ na inogide, ike na inogide. Ike ikpo ume nke igwe, ike ikuku ike nke onwe. Jiri ihe nchebe gburugburu ebe obibi, nwere ike iji ya. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ntọghata, iji...
Sistem Ọdịdị Mmiri Ike Elu nke anyanwụ
Tag: Ike dị elu nke na-eweta Panel , Gbanyụọ Ike Grid , Edozi Ewu Ezinigwe
Ihe dị mma maka ọrụ igwefoto CPU nke ọma; Ụdị dịgasị iche iche nke ibu ndị dị mkpa n'ihi sine na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. E nwere ike ịmepụta ọnọdụ ntinye ike / ọnọdụ nchekwa ike / ọnọdụ batrị maka mgbanwe.Ọdọpụta ụgbọ mmiri 5VDC-USB na 12VDC arụmọrụ...
Ekekọrịta usoro mgbasa ozi nke anyanwụ nwere ike ịkekọrịta
Tag: 5KW PV Power Station , Ogwe Ike Ike , Grid Na-ejikọta anyanwụ anyanwụ Generation System
Njikọ nke ike anyanwụ jikọtara ejiri jikọta bụ ụdị ọhụrụ nke ike ike usoro ihe ọkụkụ nke nwere ọganihu sara mbara. Ọ na-agbaso ụkpụrụ nke ime mgbanwe maka ọnọdụ mpaghara, ịdị ọcha ma rụọ ọrụ nke ọma, kesaa na itinye n'ọrụ dị nso, na-eme ka akụ...
Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ogige Ụdị Mmiri Mmiri Nke Mmiri wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.